Apple ayaa soo saartay saddex ogeysiis cusub oo iPhone 6s ah | Wararka IPhone
Apple waxay sii deyneysaa seddex cusub oo iPhone 6s ah oo ku saabsan Siri iyo Camera
Kadib dhajinta Toddoba ogeysiis oo ku saabsan Apple Watch usbuucii la soo dhaafay, hadda waa markiisa iPhone 6s. Dhammaan shaqooyinka ay ka dooran karaan, markan iyagu way doorteen Siri, Kaaliyaha codka ee aan ku cusbeyn jiilka ugu dambeeya ee casriga casriga ah ee tufaaxa laakiin waa suurtagalnimada in la waco iyada oo aan la taaban iPhone-ka, kaliya la dhaho "Hey, Siri", wax suurtagal ah mahadnaqa co -9 processor . Waxa kale oo jira xayeysiis kale oo ay nooga sheegaan waxyaabaha ku saabsan fursadaha kaamirada, iyo sidoo kale Sawirro Toos ah iyo waxyaabo kale oo badan. Waa kuwan saddex xayeysiis oo cusub.
2 Soo rog Qadaadiic ah
Xayaysiiska ugu horreeya waxaa loo yaqaan "Crush" oo waan arki karnaa jilaaga Jamie Foxx labbiska markay weydiiso Siri "Hey Siri, sidee ahay?" taas oo uu Siri kaga jawaabayo "adoo xukumaya codkaaga, waxaan dhihi lahaa waad soo jiidasho badan tahay." Waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan ogeysiiskan ayaa ah in Foxx uu yiraahdo amarka isla markaana uu codsigiisa ku sameeyo isla xukun, wax aan u maleynayo inaysan macquul aheyn. Waa inay ka mid noqotaa suuq-geynta laakiin, haddii aan sax ahay, waxaa loo qaadan karaa inay tahay xayeysiin marin habaabin ah.
Soo rog Qadaadiic ah
Fiidiyowga labaad waxaa lagu magacaabaa "Flip a coin" oo waxaan haynaa Jamie Foxx oo isku dayaysa inaan go'aansano doorka aan dooranayno, sidaas darteed wuxuu weydiinayaa Siri inuu soo rogo lacag qadaadiic ah wuxuuna oranayaa "dabo." Iyadoo tan, Foxx waxay dooraneysaa doorka uu Siri u sheegay. Mar labaad, wuxuu dhahaa amarka wuxuuna ku codsadaa isla jumlada, wax aniga igu yara yara xanaaqsan, si daacad ah. Xayeysiintan iyo tii hore labaduba waxay ka yimaadeen 15 ilbiriqsi oo dheer.
Ugu dambeyntii waxaan leenahay xayeysiin ay ugu yeereen "Kamerada", taas oo aan ku aragno dad sawir qaadaya, sida aan ugu heli karno howlaha degdegga ah 3D Touch, Peek & Pop, sida aan u helno sawirrada, Sawirada Tooska ah, oo ay ku jiraan midka qufulka shaashadda, Retina Flash, kamaradda fiidiyowga iyo dhaqdhaqaaqa gaabiska ah, dhammaantood hal daqiiqo oo fiidiyow ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple waxay sii deyneysaa seddex cusub oo iPhone 6s ah oo ku saabsan Siri iyo Camera
Wanaagsan, haddii aad awoodid. Waxaan u sameeyaa si joogto ah waxayna u shaqeysaa si qumman.
Ku jawaab Ruja
Waa salaaman tahay, Ruja. Waad ku mahadsantahay faalladaada. Ma ku sameysaa Isbaanish? Hadday sidaas tahay, waxaan u maleynayaa inaan mar labaad codkayga aqoonsan doono. Isagu dareen badan iima hayo waxaanan u maleynayaa inay tahay sababta oo ah markaan sameeyay, waan iska toosay.
Tafatir: haa way qabtaa.
Waad salaaman tahay, ma ii sheegi kartaa inta ay iPhone-kaaga ku qaadaneyso in lagaa qaado, anigaa iska leh iPhone 6s wuxuu qaadanayaa 2 saacadood 35 daqiiqo, ma ogi inay tahay sababta oo ah inay cusub tahay, ama waqtigan lacag-bixinta waa caadi.
Ma ii sheegi kartaa inta ay qaadaneyso in laga qaado lacagta Pineda 6s, waxay igu qaadataa 2 saacadood 35 daqiiqo,
Mana aqaano inay caadi tahay iyo in kale
FireCore wuxuu sii daayaa Seas0nPass 0.9.7 oo loogu talagalay Apple TV 2G 6.2.1